Xukun yaab leh oo lagu ridey 51 sano jir ciyaaraha sariirta uu caajis ku noqdey – SBC
Xukun yaab leh oo lagu ridey 51 sano jir ciyaaraha sariirta uu caajis ku noqdey
Posted by editor on Siteenbar 21, 2011 Comments
Nin u dhashay wadanka Faransiiska ayaa maxkamad ku taal dalkaasi waxay ku ridey ganaax lacageed oo gaaraya 12 kun oo doolar ka dib markii ninkan ay dacwo ku soo oogtey xaaskiisii hore oo ay kala tageen.
Ninkan ayaa xaaskiisii hore waxay ku eedeysay inaanu si wanaagsan uga haqabtirin ciyaaraha sariirta oo uu aanu qancin, iyadoo ku eedeysay inay taasi ku aheyd dhaawac nolasheeda soo gaaray mudadii ay isqabeen.
Qodobka 215 ee sharciga Faransiiska ayaa ninkan loo cuskuday kaasi oo dhigaya in lamaanaha sharciyan isku qaba ay tahay inay qaybsadaan nolasha.
Haweenaydan ayaa qaaliga maxkamada gobolka Nice waxay ka dalbatey in uu ka furo ninkeeda iyadoo ku eedeysay inaanu waxba ugu oolin, iyadoo xiligaasi qaaligu uu soo saaray in Jean-Louis uu ku masuul yahay guuldarada guurkaasi ayna tahay in uu xaaskiisa si deg deg ah u furo.
Ninkan xukunka la yaabka leh lagu soo oogey oo magaciisa lagu soo koobay Jean-Louis, ayaa waxaa haweenayda xaaskiisa aheyd ee dacwadan ku soo oogtey lagu magacaabaa Monique.
Jean-Louis ayaa warar hoose sheegayaan in shaqada oo culeys ka haystey iyo xanuuno kale ay sabab u tahay in uu gaabis ka noqdo hawlgalada sariirta, balse ilaa iyo sodon jirkiisii ayuu ku ahaa nin ku liitey sariirta sida ay ku doodayso Monique oo 47 sano jir ah.
Dacwadii caynkan aheyd tan ka horeysay ee ka dhacda wadanka Faransiiska ayaa aheyd sanadkii 2000.
Siteenbar 21, 2011 at 8:11 am
Waxaan salaamayaa dhamaan bahweynta SBC iyo dhamaan akhristayaasha Bage-kan oo aan leeyahay (Asalaamu Calaykum) Salaan kadib
Runtii ilama ahan inaan wax wakhti ah ku lumino ka hadlida dhacdadaan, Waayo namaba qusaysaba waana dhaqan dad aan diin lahayn, mar hadaysan dadku diin lahayna waa xoolo oo wax walbaa ka suurtooba marka kuwaan la yaab ma leh waayo ILAAHAY ayaa yiri ” Waa xoolohoo kale, bal iyagaaba ka baadi badan”
Siteenbar 21, 2011 at 9:07 am
waa yaab mana yaro waa arin mucjiso ah waayo naagi haday kaa adkaato waligaa kaa kicimayso dhanka sariirtana kaba daran
Siteenbar 21, 2011 at 2:53 pm
waan idin salaamay dhamaantiin hadaan muhiimada u dhaadhaco walaalkay waxaan u sheegayaa 99% dadka fransiiska ku nool inay diin leeyihiin SBC dhacdadan ayay inoo soo gudbisay wax diin ah masoo hadal qaadin sadex jeer baan akhriyoo waxaan mooday inaan anuu waalanahay oo waxaan ka baadhayay diinta aysan lahayn lakiin waan ka wayay arinkaa saxaafaduna diin, dhaqan, luqad, waa ay xushmeysaa walaalkeen wax kale ku canaano SBC taa anuu kuguma raacsani thanks.